China igciwane alahlwayo izibonelo zalokho tube ifektri abakhiqizi | Limeng
Inhloso kanye nokuchazwa kwethuluzi lesampula legciwane
1. Isetshenziselwa ukuqoqwa kanye nokuthuthwa komkhuhlane wasemitholampilo, umkhuhlane wezinyoni (njenge-H7N9), igciwane lesandla-somlomo, isimungumungwane nezinye izibonelo zamagciwane kanye nezimodeli ze-mycoplasma, ureaplasma kanye ne-chlamydia
2. Amagciwane namasampuli ahlobene nawo ayagcinwa futhi athuthwe kungakapheli amahora angama-48 esesimweni esiqandisini (2-8 degrees).
I-3.Virus namasampula ahlobene agcinwe ku- -80 degrees noma ku-nitrogen ewuketshezi isikhathi eside.
A) Uma amasampula aqoqiwe esetshenziselwa ukuthola i-viral nucleic acid, ama-nucleic acid extraction kits nama-nucleic acid detage reagents azosetshenziswa; uma isetshenziselwa ukuhlukaniswa kwegciwane, kufanele kusetshenziswe indawo yesiko leseli.
B) Izinkundla ezahlukahlukene zokufaka izicelo zinezidingo ezihlukile enanini lokulayisha uketshezi lwesampula. Sicela ukhethe umkhiqizo ofanele ngokuya ngemiyalelo kulwazi loku-oda:
Ukuze ithubhu lesampula legciwane liqoqe amasampula egciwane ezigulini zokwelashwa, inani loketshezi oludingekayo ngokuvamile liyi-3.5ml noma i-5ml.
Ukuqoqwa kweshubhu lesampula segciwane kanye nokuthuthwa kwesikhashana kwegciwane lesifo somkhuhlane wezinyoni endaweni yangaphandle, inani loketshezi oludingekayo ngokuvamile liyi-5mL noma i-6ml.
Igama lomkhiqizo: Igciwane elilahlwayo lesampula lesampula
Usayizi: 18mm * 100mm 50 / ibhokisi abantu abafaka i-tube * 1, swap * 1.
Igciwane lesampula izakhi zamapayipi amakhulu:
Isisekelo samanzi sikaHank, i-gentamicin, ama-antibiotic fungal, i-BSA (V), ama-cryoprotectants, ama-buffers begazi kanye nama-amino acid.
Ngesisekelo se-Hank's, ukungeza i-BSA (iqembu lesihlanu le-BOVINE serum albumin), i-HEPES nezinye izingxenye ezizinzile zaleli gciwane kungagcina ukusebenza kwegciwane ezingeni lokushisa elihlukahlukene, kunciphise izinga lokubola kwegciwane, futhi kuthuthuke izinga elihle lokuhlukaniswa kwegciwane.
Ukusetshenziswa kwe-Virus Sampling Kit
1. Ngaphambi kokusampula, maka ulwazi olufanele lwesampula kwilebula leshubhu lesampula.
2. Ngokwezidingo ezahlukahlukene zesampula, i-swab isetshenziselwa ukusampula esizeni esihambisanayo.
3. Ngokushesha faka i-swab kuthumbu lesampula.
4. Phula ingxenye yesibi ngenhla kweshubhu lesampula bese uqinisa ikhava yeshubhu.
5. Izinhlobonhlobo zomtholampilo ezisanda kuqoqwa kufanele ziyiswe elabhorethri kungakapheli amahora angama-48 ku-4 ° C, kanti lezo ezehluleka ukuhanjiswa elabhorethri kungakapheli amahora angama-48 kufanele zigcinwe ku- -70 ° C noma ngaphansi. Ama-specimens kufanele agonywe futhi ahlukaniswe ngokushesha okukhulu ngemuva kokuthunyelwa kwawo elebhu. Lokho okungagonyelwa futhi kuhlukaniswe kungakapheli amahora angama-48 kungagcinwa ku-4 ℃ .Uma kungagonyiwe; kufanele igcinwe ku- -70 ℃ noma ngezansi.
I-pharyngeal swab: Sula womabili amalaka wepharyngeal nodonga lwangemuva lwepharyngeal nge-swab, uphinde ucwilise ikhanda le-swab kusixazululo sesampula, bese ususa umsila. (Ifanelekile ukwenza izibonelo zalokho nalo mkhiqizo)
Langaphambilini Ibhande le-earloop nokunwebeka okulahlwayo
Okungenalutho Isampula Tube
Alahlwayo elingenalutho Tube
Alahlwayo Isampula Tube
I-Medical Blank Tube